China Laminated Girazi fekitori uye Vagadziri | Yongyu
Girazi yakaomeswa inoumbwa sejecha 2 yemashiti kana kuti yakawanda girazi inofamba, pakati payo yakasungirirwa pamwe neyakaoma uye thermoplastic polyvinyl butyral (PVB) interlayer pasi pekushisa nekumanikidza uye inoburitsa kunze kwemhepo, uye wozoisa mune yakanyanya-kudzvanywa. Steam keteni inotora mukana wekushisa kwakanyanya uye kudzvinyirira kwakanyanya kunyungududza mweya wasara mashoma emhepo mukubika
Flat yakamonera girazi
Max. saizi: 3000mm × 1300mm
Yakamonera yakarukwa girazi
Yakavezwa yakatsindirwa girazi rakarindwa
Kuonda:> 10.52mm （PVB> 1.52mm）
A. R> 900mm, kureba kweArc 500-2100mm, kukwirira 300-3300mm
B. R> 1200mm, kureba kweArc 500-2400mm, kukwirira 300-13000mm
Chengetedzo:Kana girazi rakamedzwa parinokuvadzwa nechero kunze, zvimedu zvegirazi hazvingaputi, asi ramba wakasimba uye udzivirira kupinda. Inogona kushandiswa kune akasiyana masuo ekudzivirira, windows, madziro emarambi, skylights, siling, etc. Inogona zvakare kushandiswa munzvimbo dzinodengenyeka-nzvimbo uye typhoon-inokonzeresa kuderedza kukuvara kunokonzerwa nenjodzi dzinongoitika dzoga.
Kunzwika Kwakanaka: PVB firimu ine zvivakwa zvekuvharira mafungu einzwi, kuitira kuti girazi rakamonwa rinogona kuvhara zvinobudirira kutamisa sauti uye kuderedza ruzha, kunyanya kurira kwakadzika-kwakawanda.
Anti-UV Performance: laminated girazi ine yakakwira UV blockage performance (inosvika 99% kana inopfuura), saka inogona kudzivirira kuchembera & kupera kwemukati fenicha, maketeni, kuratidzwa, uye zvimwe zvinhu.
Kushongedza:PVB ine mavara mazhinji. Iyo inopa hupfumi hwekushongedza mhedzisiro kana ichishandiswa pamwe nekurongedza uye ceramic frit.
Laminated Glass vs. Yakaomeswa Girazi
Kunge girazi rakatsamwa, girazi rakamonwa rinoonekwa segirazi rekuchengetedza. Girazi rakatsva rinopiswa kupisa kuti riwane kusimba, uye parinorohwa, girazi rakatsamwa rinopaza kuita zvidimbu zvakapfava. Izvi zvakachengeteka zvakanyanya pane isina kuvharwa kana girazi rakajairika, rinogona kupaza kuita shards.
Girazi rakakuvadzwa, kunge rakafanana negirazi rakatsumwa, haripisirwe kupisa. Panzvimbo iyoyo, iyo vinyl layer mukati inoshanda sechisungo chinoita kuti girazi risatsike kuita shoti hombe. Nguva zhinji iyo vinyl danda inoguma ichisunga girazi pamwechete.
Yepfuura: Yakaomeswa Girazi
Inotevera: Yakadzika-E Yakafukidzirwa Girazi Units
About Skup Yakaomeswa Girazi
Architectural Laminated Girazi
Dupont Skup Rakadzika Girazi
Skup Yakakomberedzwa Girazi U U kukosha
Skup Yakakomberedzwa Girazi Units
Yakavharidzirwa Girazi Girazi / Benteke Girazi
Yakadzika-E Yakafukidzirwa Girazi Units